Ny vovon-tsolika Mica LCP izay novaina LCP dia fitaovana manan-danja amin'ny sehatra 5G
Polymer Crystal Liquid (LCP) miaraka amin'ny mika mitambatra novaina dia fitaovana manan-danja amin'ny fifandraisana 5G. ny hafanana sy ny afo mahatohitra tsara dia hanolo ny fitaovana E- sigara PEEK. Tao amin'ny ChinaPlas 2019, Polyplastic dia nampiseho fitaovana e-sigara - LCP. Ity LAPER ity ...
Hua Jing kilasy vokatra mika indostrialy Hua Jing soa aman-tsara
Tamin'ny faha-19 janoary lasa teo, ny teknisianina Huajing dia nanala ireo fitaovana ireo. HuaJing mica ao Xujiatuan, Ciyu Town, County Lingshou, izay orinasa manana teknolojia avo lenta miorina amin'ny vovoka mika avo lenta. Hampiasa vola 16 tapitrisa ny orinasa hitondra any Alemana mic mandroso ...